लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु नै उत्तम विकल्प – इन्सेक
लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु नै उत्तम विकल्प
विश्वमा फैलिरहेको कारोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका क्रममा सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समग्र अवस्थाका विषयमा तीनै तहका सरकारले गरेका कामलाई अधिकारकर्मी र पत्रकार महिलाहरूले कसरी लिइरहेका छन् ? र यो विपद्को घडीमा स्वयम् अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूको भूमिका के कस्तो हुनसक्छ भनी पत्रकार तथा अधिकारकर्मीहरूसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानीः
अधिवक्ता हेमा न्यौपाने,
विश्वलाई आक्रान्त बनाएको कारोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि सरकारले देशमा लकडाउन गरेको छ । सो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । कोरोनाको औषधि भनेको भीडभाडमा नजाने र घरमै सुरक्षित रहने नै हो भन्दा पनि हुन्छ । सबै जना सुरक्षित तरिकाले घरमा बस्नु यसको सबैभन्दा ठूलो उपाय रहेछ । छिमेकी मुलुक भारतमा सङ्क्रमणको अवस्था देखिएपछि अझ हामी संवेदनशिल भएर सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ । जेठ ५ गतेसम्म मात्र होइन लकडाउनलाई बढाउनुपर्छ । सरकारले गरीब र विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण गरेको छ । वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न हामी सबैले आफ्नो टोल विकास संस्थामार्फत त्यस्ता परिवारलाई राहत वितरणका लागि सहयोग गर्नु पर्छ । आफ्नो टोलमा कोही अपरिचत व्यक्ति आउँछ भने आउन नदिने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । कोही आइहालेमा क्वारेण्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । टोलछिमेकमा भीडभाड गर्न नदिने जस्ता कुराहरूलाई पनि सचेतना जगाउने काम गर्न सकिन्छ । यतिखेर अदालतमा मुद्दा चलिरहेका र फैसला नभएका महिलाहरू एउटै घरमा बस्दा अझ धेरै खालका हिंसाहरू हुनसक्छन् । त्यसैले सजगता अपनाउने र परामर्शका कार्य गर्नु पर्छ ।
यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी
विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले लकडाउन गरेर सुरक्षित तरिकाले घरमै बस्न आहृवान गरेको छ । यो हामी सबैको सुरक्षाका लागि गरिएको लकडाउन हो । कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा ठूलो उपाय भनेको दुरी कायम गर्ने भीडभाडमा नजाने, सावधानी अपनाउने भएकोले पनि हामी घरमै क्वारेण्टाइनमा बसेका छौँ । लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा अन्य समुदाय जस्तै हाम्रो समुदाय पनि विभिन्न खालका अभाव सहन बाध्य छ । सरकारले गरीब विपन्न र एक छाक खान बिना कोही कसैले मर्नुपर्देन त भनेको छ । तर, सबैले राहत पाउने अवस्था हुन सकेको छैन कि भन्ने लाग्छ । विपन्नको तथ्याङ्क सङ्कलन स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ भन्ने सुनेको छु तर हामी कहाँ अहिलेसम्म कोही पनि आइपुगेको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाका लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू केहीले राहत पाउनुभएको छ । त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु । अन्य ठाउँमा पनि राहत नपाएका जो सुकै होस उनीहरूलाई खबर गर्ने र सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित गर्ने काममा पनि हामीले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ । विपदको बेलामा सबै मिलेर अगाडि बढ्न सके कोरोनालाई जित्न सकिन्छ ।
यो महामारी बाढीपहिरोको विपदभन्दा फरक भएकाले बाहिर निस्कनको लागि महामारीको बीचमा आँट पनि नआउँदो रहेछ । अहिले सरकारले जे जसरी काम गरेको छ अत्यन्त्यै प्रशंसायोग्य छ । हाम्रो काम भनेको सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने अग्रपङ्क्तिमा बसेर यो महामारीको विरूद्धमा लाग्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार सबैलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । कहिँ कतै कमी कमजोरीहरू भएका छन् भने सकारात्मक सुझाव दिने, आम नागरिकलाई सरकारले गरेका निर्णयहरूको जानकारी दिने, नागरिकहरूमा सूचना प्रवाह गर्ने, सुरक्षित रहनका लागि अनुरोध गर्ने, विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, संयमता अपनाउनका लागि सचेत गराउने काममा हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ ।
सरकारले यो महामारी विरूद्धमा लड्नमा लागि समयमै लकडाउन गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेलेको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो । कोरोनाविरूद्ध लड्नका लागि प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले एकदमै चासो र तदारुकताका साथ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । प्रदेशका हरेक स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग भिडियो सम्वादमार्फत स्थानीय तहले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेका कामको विषयमा जानकारी लिने र हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा निर्देशन दिने काम निरन्तर रूपमा गरिरहनुभएको छ । यो अत्यन्त्यै राम्रो पक्ष हो । त्यसैगरी कोरोनाका शङ्कास्पद व्यक्तिहरू भेटिएमा आइसोलेशन र कोरोना विशेष अस्पतालहरूको स्थापना, प्रयोगशाला निर्माण गरिएका छन् । अर्को कुरा लकडाउनको कारण सीमा क्षेत्रमा केही समयसम्म मानिस अलपत्र परे समयमा उद्धार गर्न नसक्नु विडम्बना हो । र, कतिपय विशेष प्रकृतिका घटनाहरूमा भने उद्धार गरेर स्थानीय सरकारले क्वारेण्टाइनमा राखेको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।
सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत विपन्न परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको प्रभावकारी छ । छिटफुट घटना बाहेक प्रभावकारी भएको देखिन्छ । तथापी नवलपरासी पश्चिममा कुहिएको चामल बाँडिएको गुनासो पनि आए यो असाध्यै दुःखद् पक्ष हो । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले विपन्न परिवारका सुत्केरी महिलाहरूलाई पौष्टिक आहार अण्डा, दुध, ध्यू वितरण गरेका छन् । जुन सकारात्मक छन् । यो विपदका बेलामा हामी सञ्चारकर्मीहरू सरकारले गरेका कामको नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने र समाजमा भएका समस्याहरूलाई राज्यसम्म पुर्‍याइदिने काम गर्न सक्छौ ।
यो विपदको अवस्थामा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आजका दिनसम्म हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूले सरकारप्रति केही गुनासो गरेका छैनन् । जसको आर्थिक अवस्था कमजोर त्यस्ता व्यक्ति र परिवारहरूले राहत पाइरहनु भएको छ । यो बेलामा सरकारले यो गरेन उ गरेन भन्नु भन्दा पनि हामीले कसरी सहकार्य गरेर विपदमा सामूहिक रूपमा सामना गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ । गरेका सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्ने र काम गर्ने क्रममा देखिएका कमी र कमजोरीहरूलाई सकारात्मक सुझाव दिने, आफ्नो टोल छिमेकमा रहेका असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सुत्केरी गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई केही समस्या छ भने टोलविकास संस्था र वडामार्फत समस्या समाधानको पहल गर्नु पर्छ । हामीले बाहिर जान नपाएपनि आफ्नो ठाउँबाट सहकार्य गरौँ एक आपसमा सेयरिङ्ग गर्न सकियो भने कोरोना भाइरसलाई हामीले जित्न सक्छौँ ।
यो महामारीको बेलामा लकडाउनको पूर्णतया पालना गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक बढी जोखिममा हुनसक्छन् । उनीहरूमाथि विभिन्न खालका हिंसाहरू हुनसक्ने भएकोले यस्ता विषयमा पनि हामी चनाखो हुने, सचेतरहने र सचेत गराउने, सामाजिक मनोविमर्श गर्ने, विपदको सामना गर्नका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिने जस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्‍याउन सक्छौँ । सरकारले गरेको लकडाउनलाई पूर्णतया पालना गर्ने, आफ्ना परिवार, छिमेकीहरूलाई पनि पालना गर्न लगाउने जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले विपन्न परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छ । जुन अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । हामीले कोही खान नपाएर छटपटिएका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा छन् भने वडासँग सम्पर्क र समन्वय गराइदिने, सरकारले गरेका सकारात्मक कामको प्रशंसा र कमी कमजोरीहरूको भए सुधारका लागि सुझाव दिन सक्छौँ ।
सरकारले कोरोना विरूद्धको महामारीको रोकथाम गर्न गरेको लकडाउन एकदमै आवश्यक हो । जुन कोरोना भाइरसको मुख्य औषधि हो । यति हुँदा हुँदै पनि सुरूका दिनमा हाम्रो भैरहवा क्षेत्रका भित्री गल्लीमा मानिसहरू एकदमै भिडभाड गरी हिँडिरहेका देखिन्थे । दिनमा पन्ध्रदेखि २० जना नयाँ मानिसहरू तरकारी लिएर आउँथे र अहिले पनि आउँछन् । जसले गर्दा कतै भारतीयहरू त यहाँ आइरहेका छैनन् तरकारीसँगै कोरोना भाइरस त ल्याएका छैनन भन्ने डरले सताउँछ । त्यसकारण भित्री बाटोमा पनि प्रहरीले गस्ती बढाउनु पर्‍यो । कतिपयले सम्झाउँदा भनेको मान्छन् तर कोहीले अटेर गरेर आइरहेका छन् तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ । गरिब र विपन्न परिवारका लागि स्थानीय सरकारमार्फत राहत वितरण भइरहेको छ । पहिला केही गुनासाहरू आएका थिए अहिले त्यस्तो कुनै गुनासो आएको छैन । यो विपदको सामना गर्नका लागि रहेक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनि मात्र कोरोना विरूद्धको लडाइँ जित्न सकिन्छ ।
राधा भट्टराई अधिकारी,
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नेपालमा फैलिनबाट रोक्नका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू सकारात्मक छन् । सरकारले महामारीको विरूद्ध गरेको लकडाउनलाई सबै नागरिकले पालन गर्नुपर्छ । यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले चालेका कदमहरू निकै प्रशंसनीय छन् । स्थानीय निकायले गरेका कामहरू कोरोना विरूद्ध बढी प्रभावकारी छन् । क्वारेण्टाइन निर्माणदेखि लकडाउनलाई पुर्णतया पालना गराउन र राहत वितरण गराउनेसम्मको काममा स्थानीय सरकार सक्रिय रूपमा लागेको छ । अहिलेको यस परिस्थितमा मानिसहरू बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । हामी अधिकारकर्मीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि हरेक नागरिकलाई सरकारले गरेका निर्णयहरूको पालना गर्न सचेत गराउने, सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने, देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सकारात्मक रूपमा सुधारका लागि सुझाव दिने र कोरोना शङ्कास्पद कोही भए सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ र गरिरहेका छौँ ।
लकडाउनको पूर्णतया पालना भएको छ । जहाँ लकडाउनको अवज्ञा गरिएको छ त्यस ठाउँमा टोल विकास संस्थामार्फत आवतजावत गर्न दिएको छैन । राहत वितरणको कार्य पनि भएको छ । गरीब तथा विपन्न परिवारले राहत पाएका छन् । लकडाउनको कारणले सुकुम्वासी बस्तीका महिला तथा बालबालिकाहरू बिरामी भएको अवस्थामा यातायातका साधन नपाउने हुँदा समस्या देखिएको छ । यो महामारीलाई रोक्नका लागि लकडाउनको कार्यान्वनयन आवश्यक छ । लकडाउनको समयमा स्थानीय तह भित्रै सानातिना सीप मुलक कार्यमा जोड दिन जरुरी छ । हाम्रो भूमिका भनेको आफुले जानेका कुरा शेयर गर्ने, समुदायमा सूचना प्रवाह गर्ने, सरकारले गरेका निर्णयहरूको पालना गर्न लगाउने नै हो ।
प्रकाशित मितिः ०७७ वैशाख २७ गते
सीमा क्षेत्रका नागरिक सचेत छन्, आउजाउमा प्रतिबन्ध छः जनप्रतिनिधि
विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले के कस्ता सतर्कता र सुरक्षाहरूको विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् । जिल्लामा समन्वय र सहकार्यको…
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) - भ्रम र यथार्थ (२४ प्रश्न र तिनका उत्तर)
काठमाडौँ ०७६ चैत ६ गते कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला-भ्रमहरूको बारेमा सही जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ नेपाल १. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट…
०७६ चैत ७ गते
मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पहिला परिवारको साथ आवश्यक
शिल्पा चौधरी मेरो जन्म दाङको राजापुर गाउँपालिकामा बालक(छोरा)को रुपमा भएको हो । हुर्कँदै जाँदा छोरीको अनुभूति गर्न थालेँ । म जन्मिएपछि खुशियाली छाएको परिवारमा छोराको स्वभाव हाउभाउ फरक देखेपछि मलाई…
०७६ मङ्सिर १८ गते
कानुनी ज्ञान अभावका कारण न्याय सम्पादन सकसपूर्ण
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
०७६ कात्तिक १९ गते
जातीय समानताका लागि स्थानीय सरकार सचेतना अभियानमा !
नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । दलित भएकै आधारमा विभेद गर्ने गेका घटना समाजमा अहिले पनि छन् । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरनुपर्छ…
०७६ असोज १५ गते